Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseIndiya eziQhekezayo » Ukhenketho lwaseIndiya ludanile kwinqanaba leNkqubo eNtsha
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zaseIndiya eziQhekezayo • Utyalo mali • iindaba • Ukwakha kwakhona • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo
Ngelixa uMbutho waseIndiya wabaSebenzi boKhenketho (IATO) usamkela isaziso sokuKhutshwa kweeNkonzo zokuThunyelwa kwamanye amazwe kwiIndiya Scheme (SEIS) Izikripthi zabaqhubi bezokhenketho kunyaka-mali ka-2019-20, kwangaxeshanye kuyadana ukuba kuncitshisiwe ukuya kwiipesenti ezi-5 ukusuka kwipesenti ezisi-7.
U-IATO ubongoza urhulumente ukuba abuyisele izibonelelo ze-SEIS zibuyele kunyaka owawungaphambili.
Kwacelwa ukuba inyuse ipesenti iye kwi-10, nangona kunjalo, yacuthwa ngepesenti ezi-2 endaweni yoko.
Ukuncitshiswa kwipesenti ukuya kwi-5% kuya kuchaphazela abaqhubi bezotyelelo abancinci nabaphakathi, ngelixa bebamba iiRs. Iicrores ezi-5 ziya kuba nefuthe elibi kubanini babatyeleli abakhulu.
“Iminyaka enesiqingatha edlulileyo ibilelinye lawona manqanaba mabi kubakhenkethi, kwaye xa kujongwa ubunzima obunyamezelayo, kuyabongozwa ukuba urhulumente abuyisele isibonelelo se-SEIS kwiipesenti ezisi-7 njengoko kuhlawulwe kunyaka ongaphambi kwalowo. , ”Utshilo IATO kwezinye iilwimi UMongameli Rajiv Mehra.
Kwiinyanga ezili-18 zokugqibela, abaqhubi bezokhenketho abangenayo babephantse bafumana ingeniso ye-zilch kwaye uninzi lwabo lwalusonga amashishini alo. Ukujonga oko, isibonelelo se-SEIS besilindelwe ixesha elide, njengoko oku kuya kubonelela ngoncedo lwezemali olunokunceda icandelo lezokhenketho lijongane nale ngxaki ye-COVID-19 coronavirus.
Ngexesha lengxoxo, urhulumente waye wacelwa ukuba ayinyuse iye kwiipesenti ezili-10 njengenyathelo lexesha elinye, nangona kunjalo, ukuthoba isibonelelo kunye nokuyibeka kwi-Rs 5 crores kuyadanisa kwaye urhulumente uyacelwa ukuba okungenani ayinyuse iye kwiipesenti ezisi-7. kwaye ususe i-caps ye-Rs. Iicrores ezi-5 ubuncinci zeshishini lokhenketho kunye nokwamkela iindwendwe.
“Sinethemba lokuba urhulumente angasijonga isicelo sethu,” utshilo uMnu. Mehra.
Kuya kuqatshelwa ukuba ukunciphisa ipesenti ukuya kwi-5% kuya kuba nefuthe kubakhenkethi abancinci nabaphakathi, ngelixa bebamba ii-Rs. Iicrores ezi-5 ziya kuba nefuthe elibi kubanini babatyeleli abakhulu.
Ezokhenketho zenze igalelo elibalulekileyo kunondyebo kwaye ibingumqeshi ophambili ngokunjalo. Kwimeko enxunguphalisayo ngolu hlobo, icandelo lezokhenketho likhangela uncedo kurhulumente ukuze lisinde kwaye livuseleleke.
IiNkonzo ezithunyelwa ngaphandle zivela Indiya Isikimu (i-SEIS) ijolise ekukhuthazeni ukuthunyelwa ngaphandle kweenkonzo ezivela eIndiya ngokubonelela ngetyala lomsebenzi elifanele ukuthunyelwa kwelinye ilizwe. Ngaphantsi kweskimu, ababoneleli beenkonzo, abakwi-India, baya kuvuzwa phantsi kwesikimu se-SEIS, ngalo lonke ukuthunyelwa kweenkonzo ezifanelekileyo ezivela e-India. Kule nqaku, sijonga kwiNkonzo yokuThumela kwelinye ilizwe kwi-India Scheme ngokweenkcukacha.